Dhalista Kubbadda Dheeriga ah ee 'Groove Ball', Wheel dhalista, Dhalista Gawaarida - Shallow Yong
Codsiga dhalista QYZC
Qaadashada QYZC waxay u adeegtay warshado kala duwan oo adduunka ah
Warshadaha qalabka mashiinka
Qalabka dhalinta tamarta
QYZC waxay damaanad qaadeysaa tayada wax soo saarka iyo adeegga ugu fiican
Hordhac u qaadista kubbadda sare ee jeexdin: horay loogu yaqaanay isku xigxiga kubbadda xagjirka ah ee isku xigta, waa tan ugu ballaadhan ee la isticmaalo. Astaamaheeda waa iska caabinta khilaafaadka hooseeya iyo xawaaraha sare. Markay sita xamuulka kaliya xamuulka shucaaca, xagalka xiriirku waa eber. Marka dhalida kubbada jeexdin ee qoto dheer leh nadiifin shucaac oo weyn, waxay leedahay waxqabadka conta xagal ...
Waa maxay dhalida kubbada jeexdin ee qoto dheer?
Waa maxay dhalida kubbada jeexdin ee qoto dheer? Dhamaan kubadaha lagu dhejiyo isku mid maahan. Noocyo kala duwan oo naqshadeyn ah ayaa loogu talagalay inay buuxiyaan shuruudaha gaarka ah, sidaa darteed haddii aadan injineer ahayn ama alaab-qeybiye (xitaa haddii aad mararka qaarkood sameyso), had iyo jeer ma sahlana in la soo xusho midka ku habboon baahiyahaaga. Qaado mid ka mid ah noocyada dhalista ee badanaa la isticmaalo - qoto dheer goolasha kubbadda. Sababta oo ah ...
Waa maxay waxyaabaha saameynaya dhalista ...
Waa maxay arrimaha saameynaya dheelitirka culeyska? Ujeedada qaadista taamku waa in la sameeyo giraanta gudaha ama giraanta dibedda oo si adag loogu hagaajiyo usheeda dhexe ama qolofka, si looga fogaado qulqulatada qallooca ama wareegga wareegga dusha labada dhinacba. Noocan isdabajoogga ah ee aan fiicnayn (oo loo yaqaan 'creep') wuxuu sababi doonaa kuleyl aan caadi ahayn, xirashada dusha sare ee isugeynta (taas oo ka dhigi doonta birta duugoobay ...
Afar qodob oo fiiro gaar ah u leh ...
Sida loo doorto dhalista saxda ah Marka hore, nadiif ahaanta iyo bay'ada ku hareeraysan nadiifi uma baahni inaan kuu sheego waxa socda. Xitaa haddii siigada aan la arki karin ay gasho dhalmada HGF, waxay xirnaan doontaa sitaalka. Hadaad si qumman u dhigto, ciida indhahaaga kuma xoqi kartid, taas oo run ah! Marka labaad, isticmaalka rakibaadda waa inuu ahaadaa mid taxaddar leh oo rakibaadda saxda ah Waxaan ka leexan doonin ...
Astaamaha iyo dalabka ...
Sida loo doorto midab qaadashada saxda ah Astaamaha astaamaha rullaluistemadka duuban ee duubista shaashadda duubku waa nooc gaar u dhalasho. Wareegyada gudaha iyo dibaddaba ee xargaha ayaa leh marinno dhaadheer oo laalaab ah, oo ruxmooyinkuna waa qaab shaashad ah. Rullaluistemadka iyo wadiiqada ayaa ku jira xiriir khadka, oo qaadi kara radial culus iyo culeys isku dhafan oo axial ah, sidoo kale wuxuu qaadi karaa culeys saafi ah. The weyn ee c ...